China Quartz Crucible Manufacturer na Supplier | Dinglong
onyinye ụlọ ọrụ
Silica Fused maka Ngwa Ntughari
Silica Fused maka Nkedo itinye ego
Silica gwakọtara maka Industrylọ Ọrụ Elektrọnik
Fused silica ntụ ntụ
Fused Silica ntụ ọka
Fused Silica ntụ ọka Refractory Materials
Fused silica ọka
Sand Silica gwakọtara
Akụrụngwa Silica Mkpụrụ Refractory
Silica ntụ ntụ
Quartz ntụ ntụ
Ihe anakpo quartz anyi nwere ezigbo nguzogide ihe oku di nma, ihe di nma nke oma, na nso nso mgbasa ozi nke okpomoku. A na-eji okpukpu okpukpu quartz eme ihe na mpaghara nke mmepụta nke mono-crystalline na polycrystalline silicon ingot, metal melting na na.
Ngwa: Anyanwụ, Foundry, Semiconductor
Ngwaahịa a pụrụ ịdabere na ya
Quartz crucible bụ akpa dị mkpa maka mmepụta nke sịlịkọn monocrystalline na sịlịkọn polycrystalline. Ọ bụkwa akụrụngwa bụ isi maka ụlọ ọrụ semiconductor na silicon solar cell. Ngwunye anyị quartz na-eji Unimin High Purity Quartz Sands, bụ nke na-edozi nsogbu nke metal na-enweghị alkali na-agbasa n'ime ma belata njupụta adịghị ọcha nke mkpuchi mkpuchi. Ọ na-ana achi achi obere ọdịnaya nke oxygen na urughuru ntụpọ na-eme ka crystallization ọnụego mma budata.
Njirimara nke Quartz Crucible
Ogologo quartz dị ọcha nke uru dị iche iche adịghị na ihe ndị ọzọ. Njirimara pụrụ iche nke quartz crucible gụnyere nguzogide magburu onwe ya na ọkụ ọkụ, ọnọdụ nrụrụ dị elu na ịdị nro dị nro na obere nrụpụta ọkụ.
Enweghị ọkọ, enweghị mgbape, enweghị olulu doro anya, nhichapụ na enweghị mmetọ na elu na ime elu; kenkowaputa na ọ dịghị Mgbakwụnye na esịtidem elu, ọ dịghị egosipụta ma obere obere egosipụta kwere, ọ dịghị nwa ihe ma obere obere ojii isi kwere, ọ dịghị ọcha isi; enweghị ọdịda ihu n’elu ọnụ; ọkpụrụkpụ nke mgbidi agụụ uzo mkpuchi is≥4mm.
Nchọpụta nke ịdị ọcha> 99.995 "， Aluminom ọdịnaya bụ <16ppm ， Boron ọdịnaya bụ <0.1ppm.
Banyere Dinglong Quartz Materials
A na-arụpụta ngwaahịa quartz ndị a na ụlọ ọrụ enyere na Lianyungang, China. Site na afọ 30 nke nguzobe, Dinglong enwetala nkwado siri ike na teknụzụ ma nweta ahụmịhe dị egwu maka imepụta ezigbo quartz ihe. Anyị n'ichepụta Filiks kachasị nke kwekọrọ na ntụkwasị obi - na-enyere aka hụ na ngwaahịa na uru bara uru. Anyị kwenyere na ngwaahịa ndị a pụrụ ịdabere na ha nwere ike inyere anyị aka inweta ahịa ndị isi ma wulite ntụkwasị obi na ọbụbụenyi na ndị ahịa anyị.
Nke gara aga: Quartz tube
Osote: Akụrụngwa Silica Mkpụrụ Refractory
Ihe Silica Na-emegharị
Ọcha dị elu Quartz Crucible
Ike imeghari ohuru Jiri Quartz Crucible
Anyanwụ Na-eji Ceramic Crucible
Fangshan ulo oru district, Lianyungang, JiangSu, China
Copyright - 2020-2021: All Rights echekwabara.